PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - BATHINI ONGOTI
“Ngitubekile yindlela unyaka u-2017 no-2018 ongiphathe ngakhona. Kuqale ngokuba ngidayise konke enginakho ukuqhuba ibhizinisi lami, kwaphoqa ukuba ngidilize izisebenzi okwaba buhlungu kakhulu ngoba ngazizwa njengesahluleki, ngavalelwa nangaphandle ehhovisi engangisebenza kulona.
“Okungishaye kakhulu wukudlula emhlabeni kukagogo wami ngo-2017. Ngisabhekene nalokho ngaba sengozini yemoto engishiye ngiyinkubele izinyanga ezintathu zokuqala zika-2018, okusho ukuthi ikota yokuqala yalowo nyaka ngiyichithe ngingenzi mali.”
Uthi emuva komyalezo othuse abaningi awubhale ngomsombuluko, ubesekhathele abantu bemnika izeluleko namacebo, wabona kungcono ukuba avale izingcingo zakhe, wathi kummangazile ukubona ukuthi bangakanani abathintwe yindaba yokunyamalala kwakhe, waxolisa emndenini, abangani nabo bonke abakholelwa kuyena nenkampani yakhe, iskinny Sbu Socks.
Ucele isineke nokunikwa isikhathi njengoba echaze ukuthi usabonana nochwepheshe bengqondo mayelana nalesi simo.
Ibhizinisi likasbu lingelinye elihlonishwayo futhi elisesitayeleni ezimpahleni zokugqoka zabantu besilisa futhi elinamakhasimende ayizincwasimende kanjalo nosaziwayo.
Ukuthuthuka nokwaziwa kweSkinny Sbu Socks kwaba yingesikhathi isitolo esidumile sezimpahla zabantu besilisa simnika inkontileka yokufaka imikhiqizo yakhe kusona.
Uma ulandela imibhalo yakhe yakamuva kuyacaca ukuthi kunezingqinamba ezahlukene abebhekene nazo ngokwebhizinisi njengoba eke wabhala ukuthi: “Kukushiya ukhamekile ukufuna impilo engcono nephezulu.
“Ukubalekela inhlupheko ku- yabiza kodwa kanjalo nokuphokophela ukuqeda isizukulwane senhlupheko emndenini wakho nakho kukushiya ukhathele futhi ukhandleke ngisho emnkantsheni. Ngiyabonga ngemuva lapho ngiphuma khona kodwa angifuni ukufa ngisekuleso simo,” kusho yena.
Yize olukasbu udaba luphethe kahle, kakubanga njalo emndenini kashoki Mokgapa, obengumlingisi emidlalweni eyehlukene kamabonakude okubalwa i-intersextions ne-ashes to Ashes esivuke ngezithi uzibulele ngolwesibili olwedlule.
Ngokwesitatimende esikhishwe yinkampani ebhekelele izindaba zakhe, imoonyeenn Lee Associates, lo mlingisi uzibulale ngemuva kwesikhathi eside ebhekene nengcindezi ( clinical depression).
“Ubengowesifazane oqotho futhi obelufuna usizo kodwa kuyacaca ukuthi lesi simo besingaphezu kwamandla akhe,” kusho imoonyeenn Lee Associates esitatimendeni. ILANGA likhulume nonkz Nozibusiso Nyawose, owaziwa kakhulu ohlelweni lukamabonakude, utatakho, oyi- clinical psychologist ethekwini, ukucaciseleka kabanzi ngezimpawu nezimo eziphazamisa umqondo okuze kuholele ekuphathweni yingcindezi nendlela okumele siyiqonde ukubambisana nalabo ababhekene nalesi simo.
Unkz Nyawose ufanise ingcindezi nesilonda esikudla wedwa ngaphakathi.
“Singcono isilonda esisenyameni ngoba uyasibona uma siphola futhi uyakwazi ukusinakekela ngendlela. Lesi sinzima ngoba akekho obona ukubhibha kwaso ngaphakathi ngoba sidla wena wedwa,” kusho yena.
Uthe miningi imithelela edala ukuba umuntu agcine esenengcindezi - kungaba yizimo umuntu abhekene nazo, yindlela akhule ngayo, yisikompilo lenda- wo umuntu akuyona nokunye. Ngokusho kwakhe ingcindezi ihlukene ngezindlela eziningi, wabala i- bipolar, yi- personality disorder ne- schizophrenia.
“Njengoba siqala umfumfu (October), okuyinyanga yokuqwashisa ngemental Illness, miningi imikhankaso ezosabalala ekhuluma ngalesi simo okumele umphakathi uzimbandakanye nayo ngoba ngokocwaningo, uhhafu wabantu abasemhlabeni jikelele baphila ngaphansi kwengcindezi.
“Okudabukisa kakhulu wukuthi thina bantu abamnyama siyibukela kude kanti ishaya thina kakhulu. Yingakho kubalulekile ukuba uma usola ukuthi kukhona izimpawu ezingajwayelekile kumuntu osondelene naye, kuhle ukuba lowo muntu atholelwe usizo kwabaqeqeshelwe izimo zengqondo.
“Kuvamisile ukuba uma ukhuluma ngesimo sakho abantu bakwahlulele noma bakuthathe kancane njengomuntu ongakwazi ukumelana naso. Abanye baze bakucebise ngokuthi kumele uyophumula noma uyozijabulisa ngokuzikhipha nabangani, ushaye neziphuzo ezidakayo.
“Yingakho abaningi bekhetha ukuba bodwa ngoba yonke le mibono kayibasebenzeli. Uma unesihlobo noma umngani osola ukuthi unengcindezi, ungazami ukuba wudokotela wakhe. Futhi lesi simo aselapheki kodwa siyalawuleka ngokuba abonane nama- clinical psychologist azomxilonga ngendlela,” kusho yena.
Uthe ingcindezi kayinasigaba seminyaka kangangoba kukhona abantwana abaneminyaka esukela kweyisihlanu abaphathwa yiyona kodwa uthole ukuthi abazali kabaqondi, bazitshela ukuthi umntwana uyatetema noma uwuhlupho.
“Ngale kweminyaka, ayiyi ngokuthi uphila kuliphi izinga lempilo.
Ungaba nakho konke kodwa
UNKZ Nozibusiso Nyawose oyi-clinical psychologist ethekwini ophinde abonakale ohlelweni lukamabonakude, utatakho uthi lukhona usizo ezibhedlela zamahhala nezizimele kulabo abakhombisa izimpawu zengcindezi.
USOMABHIZINISI osemncane ozamazamise izinkudla zokuxhumana ngomyalezo onomuzwa wokubalisa nokucela usizo awubhale kutwitter ngaphambi kokunyamalala. Esetholakele uvumile ukuthi ubhekene nezimo ezinzima empilweni.